१०८ वजनबाट ६३ किलो बनाउन सफल भइन यी मोडेल, के के गरिछन् त ? - Everest Dainik - News from Nepal
१०८ वजनबाट ६३ किलो बनाउन सफल भइन यी मोडेल, के के गरिछन् त ?
काठमाडौं, तौल बढनु महिला र पुरुष दुबैका लागि सबैभन्दा बढी तनावको विषय बनेको हुन्छ ।
तौल घटाउनकै लागि कैयन कसरतदेखि सामानहरुको समेत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यसरी केही किलो तौल घटने भएपनि एकैचोटी चालिस किलोभन्दा बढी तौल घटाएको सुन्दा भने अचम्म नै लाग्छ ।
रोजी मर्क्याडो नामकी मोडलले पनि मोटी भएकै कारण मोडलिङ गरिरहेकी थिइन्। मोटा महिलाका लागि उनी बिज्ञापन गर्थिन्। मोटो भएर राम्रै काम पाइरहेपनि उनलाई जीवनदेखि खुशी मिलेन। उनले मोटोपन घटाउने प्रण गरिन्। कुनै समय १०८ किलो वजन भएकी उनी अहिले ६३ किलोकी छिन्। उनले ४५ किलो वजन घटाइन्।
‘एक्सरसाइज त केही समय कडा गर्नैपर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘जुम्बा एक प्रकारको एरोबिक्स डान्स हो। जहाँ संगीतसँगै नाँचिन्छ। असिनपसिन भएपनि रमाइलो लाग्छ र नाँच्न मन लागिरहन्छ। त्यसैले सुरुमा एक्सरसाइज गर्ने बानी पार्न यसले सघायो।’